लकडाउनमा मदनकृष्ण- यो मन बदल्न चाहन्नँ, यो पल बदल्न चाहन्नँ :: Setopati
मदनकृष्ण श्रेष्ठ। तस्बिर: सेतोपाटी
लकडाउनले सबैको सक्रियता 'लक' गरिदिए पनि लोकप्रिय हास्य अभिनेता मदनकृष्ण श्रेष्ठको भोगाइ बेग्लै छ।
छोरीलाई बिहे गरेर पठाएको १८ वर्षपछि पहिलोचोटि उनी आफ्ना छोराछोरीसँग एकसाथ समय बिताइरहेका छन्। यो साथले उनलाई नयाँ सिर्जनाको जाँगर थपेको छ। नेपाली संगीत क्षेत्रका यी पुराना गायकले लकडाउनकै मौकामा नयाँ गीत रेकर्ड गर्न पनि भ्याएका छन्।
क्यान्सरले श्रीमतीको निधन भएको दुई वर्षपछि मदनकृष्णले पारिवारिक समय बिताउने र सँगसँगै संगीत सिर्जना गर्ने मौका पाएका हुन्।
'घरि छोरीले आएर सुम्सुम्याउँछे, घरि छोराले,' लकडाउनको समय कसरी बिताइरहनुभएको छ भनेर सोध्न शुक्रबार सेतोपाटीले टेलिफोन सम्पर्क गर्दा मदनकृष्णले हाँस्दै भने, 'कोभन्दा को कम भनेजस्तो छ। छोरा, बुहारी र नातिनीको गहिरो माया पाइरहेको छु।'
उनले लकडाउनकै बेला गीत रेकर्ड गराएको थाहा पाएपछि हाम्रो कुराकानी त्यतैतिर मोडियो।
श्रेष्ठले भर्खरै रेकर्ड सिध्याएको गीतको बोल रहेछ– यो मन बदल्न चाहन्नँ, यो पल बदल्न चाहन्नँ।
गीत सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्:
Setopati · यो मन बदल्न चाहान्न || Madan Krishna Shrestha Song ||
खासमा गीत रेकर्डिङको सुरूआत उनकी छोरीको इच्छाबाट भयो।
केही महिनाअघि मदनकृष्णकी छोरी सराना अमेरिकाबाट आइन्। नेपाल बसाइँकै क्रममा गीत रेकर्ड गर्ने उनको इच्छा थियो। मदनकृष्णले आफ्नो छोरीको निम्ति एउटा गीत लेखिदिन नीर शाहलाई अनुरोध गरेछन्।
नीर शाहले स्वीकार गरे।
उनी गीत लेख्न त बसे, तर रचना क्रममा घरिघरि मदनकृष्णकै चेहरा सम्झेछन्। उनले मदनलाई भने, 'छोरीलाई त होइन, तपाईंको आत्मामै बसेर लेखेको हुनाले यो गीत तपाईंलाई नै गाउन लेखिदिएको छु।'
मदन असमञ्जसमा परे। गीत केही समय त्यत्तिकै थन्किरह्यो।
यसबीच मदनकृष्णका गायक एवं संगीतकार छोरा यमनले त्यसमा संगीत भरे। र, नीरको इच्छाबमोजिम आफ्ना बाबुकै स्वरमा रेकर्ड गराउने चाँजो मिलाए।
'यमनले नै कम्पोज, एरेन्ज र प्रोग्रामिङका सबै काम सिध्याएपछि लकडाउन बेला घरैमा बसेर रेकर्ड गरेका हौं,' श्रेष्ठले भने, 'गीत गाउन मलाई एक दिन पूरै लाग्यो। यमनले त अझ धेरै समय लगाएको छ।'
मदनकृष्णका अनुसार उनका छोराले गीत रेकर्डिङलाई चाहिने सम्पूर्ण प्राविधिक उपकरण घरमै जडान गरेका छन्। त्यसैले, यो गीत रेकर्ड गर्न उनले अरू स्टुडियो धाउनै परेन। छोराको सहयोगमा घरभित्रै सबै काम पूरा भयो।
'पहिले पहिले एक टेकमै गीत रेकर्ड गर्थेँ,' उनले भने, 'अब चाहिँ नसक्ने भएछु, यो गीतका लागि दिनभरि गाएको गायै गरिरहनुपर्यो।'
यो प्रसंग उल्लेख गरिरहँदा उनले 'के घर के डेरा' फिल्मका लागि कोलकाताको टालीगंज स्टुडियो गएर गीत रेकर्ड गर्दाको सम्झना सुनाए। त्यो फिल्मको 'हे भगवान मेरो खल्तीको घाउ, अब धेरै नचर्काऊ' गीत मदनकृष्णले नै गाएका हुन्।
'त्यो बेला हामी गायक-गायिकाको टोली नै कोलकाता गएका थियौं,' श्रेष्ठले थपे, 'मैले एक टेकमै गीत 'ओके' गर्दा सबैले प्रशंसा गरेका थिए।'
त्यसपछि पनि धेरै गीत एकटकमै रेकर्ड गरेको उनले सुनाए। 'पार्किन्सन रोग लागेपछि भने पहिलेजस्तो गाउन नसकिने रहेछ,' भने, 'स्वर नै रोकिदिने, असाध्यै कम्पन हुने र सास नपुग्ने समस्या आइरहे।'
यस्तो अवस्थामा पनि पटक-पटक लगाएर गाएको गीतलाई छोराले नै टुक्राटुक्रा मिलाएर जोडिदिएको श्रेष्ठले बताए।
'हिजोआज मेसिनले जे पनि मिलाइदिँदो रहेछ,' उनले समय र प्रविधिमा आएको परिवर्तनबारे भने, 'छोराले मिलाइदिएपछि उहिले रेडियोमा गाउँदाको जस्तै आवाज सुनियो।'
छोरीका लागि भनेर लेखाएको गीत आफैंले गाएपछि छोरीले चाहिँ के गाइन् त?
हामीले यही प्रश्न मदनकृष्णलाई सोध्यौं। उनले छोरी नेपाल आउनेबित्तिकै एउटा गीत लेखिदिएका थिए–
'एकतर्फी माया न हो मेरो
दिल टुट्यो त टुट्यो
आफ्नै बेहोशीको घाउ हो यो
दुख्न थियो दुख्यो'
Setopati · एकतर्फी माया न हो... || Song Writer : Madan Krishna Shrestha ||
यो गीत छोरीकै स्वरमा रेकर्ड भएको र नायिका श्वेता खड्काले म्युजिक भिडिओसमेत बनाइदिएको श्रेष्ठले बताए, 'म्युजिक भिडिओ तयार मात्र भएको थियो, रिलिज गरौंला भनेकै बेला लकडाउन भइदियो।'
छोरी नेपाल आउनेबित्तिकै कोरोना महामारी फैलिएको थियो। त्यसयता उनी यतै छिन् भने ज्वाइँ र नाति अमेरिकामै।
छोरीको गीत रेकर्डिङ क्रममै मदनकृष्णले निकै वर्षअघि लेखेको अर्को गीत पनि रेकर्ड भयो। त्यो गीत अरबमा मजदुरी गर्न जाने नेपालीले आफ्नी प्रेमिकालाई सम्झना गर्दाको भोगाइमा आधारित छ।
'बस्दा बस्दा मरुभूमिमा वर्षातको रूपै बिर्सें
हरिया पात रसिला बात सबै सबै नै बिर्सें'
डेढ दशकअघि 'मह जोडी' कार्यक्रम लिएर कतार, कुवेत र युनाइटेड अरब इमिरेट्सको यात्रामा थियो। त्यति बेलै त्यहाँका नेपाली मजदुरको भोगाइ देखेर आफूले यो गीत लेखेको मदनकृष्णले सुनाए।
यो गीतको अन्तिममा 'कुर्दा कुर्दा तिमीलाई, अब त मायाको रुपै बिर्सें' भन्ने पंक्तिले आफूलाई असाध्यै छुने उनको भनाइ छ। छोरीकै स्वरमा रेकर्ड भएको यो गीत युट्युबमा राखिएको छ।
मदनकृष्णले छोरीसँगै गाएको युगल गीत पनि केही महिनाअघि तयार भइसकेको छ। राजेन्द्र थापाले लेखेको 'पानी छाया नलाम् माया' बोलको त्यो गीत पनि युट्युबमा छ।
'नेपाल आएर संगीतमा सक्रिय हुँदै गर्दा अब छोरीले पनि यतै बस्ने चाँजो मिलाउँदैछे,' श्रेष्ठले भने, 'त्यसपछि उसको परिवारै सधैंका लागि नेपाल आउने तयारी चलिरहेको छ।'
मदनकृष्णका छोरा भने आमा क्यान्सरको बिरामी भएपछि नै अमेरिका बसाइ छाडेर सपरिवार नेपाल फर्केका हुन्।
गीत रेकर्डिङ र परिवारको साथमा केन्द्रित कुराकानीपछि हामीले मदनकृष्णको लकडाउन दिनचर्या बुझ्ने कोशिस गर्यौं।
'म त हिजोआज आकाश हेरेर रमाइरहेको छु,' बादल लाग्नुअघिको चकमन्न आकाश सम्झाउँदै उनले भने, 'यो काठमाडौंको आकाशमा यसरी टल्किएका तारा नदेखिएको कति लामो समय भइसकेको थियो।'
सफा आकाशले आफूलाई काठमाडौंका पुराना दिनको स्मृतिसँग जोडिदिने भएकाले पहिलेका धेरै कुरा सम्झनामा आउन थालेको उनले बताए।
लकडाउनले मानिसलाई घरभित्रै बस्न विवश पारे पनि उपत्यकामा सफा हावा बग्न थालेको देख्दा उनी असाध्यै रमाइलो मान्छन्।
'यसबाहेक फुर्सद बेला टेलिभिजन हेर्छु,' उनले भने, 'नेपाल-भारतको सीमामा अड्किएका नेपाली र हुलका हुल मानिस घर फर्कन पैदलै राजमार्गमा हिँडेका दृश्यले मन आत्तिएको थियो।'
मदनकृष्णलाई सबभन्दा दुःख भने राजनीतिक नेताहरूको चालामालाले बनाएको छ।
'अहिलेको बेला सबै एक भएर कोरोनासँग लड्नुपर्थ्यो,' उनले भने, 'यहाँ त फुटबल खेल्ने खेलाडीले गोलपोस्ट हेर्न छाडेर मैदानभित्र आफ्नै टोलीसँग झगडा गरेर बसिरहेजस्तो पो देख्छु।'
नेपाली राजनीतिका विसंगतिले सर्वसाधारणलाई जहिले पनि दुःखी बनाउने गरेको उनको भनाइ छ।
'देशको परिस्थिति फेरिएला भनेर सोच्यो,' उनले थपे, 'झन् पछि झन् जिल्ल पारिदिन्छन्। म त यो सब जिल्ल परेर हेरिरहेको छु।'
नेपालका नेताहरू सम्झिरहँदा उनले एउटा पुरानो घटना सुनाए।
केही वर्षअघि 'मह' ले राजनीतिक विसंगतिलाई लिएर एउटा गीत बनाएको थियो–
'ईश्वर तिमीले जगत बनायौ, चन्द्र बनायौ सूर्य बनायौ
यति सुन्दर पृथ्वी बनायौ, पृथ्वीमै राम्रो नेपाल बनायौ
एउटा राम्रो नेता दिनलाई चाहिँ
किन तिमीले टाउको कन्यायौ?'
धेरै मञ्चहरूमा गाइसकेको र अत्यन्त प्रशंसित यो गीत स्रोताहरूले एकपटक सुन्नासाथ कहिल्यै नबिर्सने सम्झना मदनकृष्णसँग रहेछ।
'त्यसदिन हामी भक्तपुरमा मानव सेवा आश्रमको कार्यक्रममा भाग लिएर फर्किरहेका थियौं,' उनले भने, 'त्यति बेलै बसमै यो गीत गाउन सुरू गरेँ।'
मदनले गीत गाउँदै गर्दा स्रोताहरू रमाउँदै गए। एकठाउँ पुगेर 'एउटा राम्रो नेता दिएको भए तिम्रो के पो जान्थ्यो?' भनेर स्वर ताने। 'त्यो ईश्वरप्रति पोखिएको आक्रोशजस्तो थियो,' मदनकृष्णले सम्झे, 'म त त्यो लाइन तान्दातान्दै रुन पो थालेछु।'
बसभरिका स्रोता पनि मदनकृष्ण सँगसँगै भावविह्वल भएछन्।
'मैले गाउँदा गाउँदै नेपालका नेताहरूको अनुहार सम्झन पुगेछु,' उनले भने, 'ईश्वरसँग गुनासो गर्दागर्दै कल्पिएर रोएछु।'
सबैलाई हँसाउँदै आएको त्यो गीत यसरी आफ्नै आँसु बगाउने अवस्थामा पुग्नुलाई मदनकृष्ण नेपाली राजनीतिको पतनको पराकाष्ठा मान्छन्।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २०, २०७७, ०३:१०:००